Ku cusbooneysii Pocophone F1-ka Android 9 waa suurta gal isbuucaan | Androidsis
El Pocophone F1 wuxuu ahaa iibiyaha ugu fiican tan iyo markii la bilaabay. Mid ka mid ah taleefannada leh qiimaha ugu fiican ee lacagta ku jirta suuqa ayaa la yimid faahfaahin qaar ka dhigaya taleefankan mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee la tixgelin karo haddii aad raadineyso heer sare oo ah qiimaha ugu fiican. Waana taleefoonka cusub ee raqiiska ah ee loo yaqaan 'Xiaomi' kaasoo ku yimid qiimo aad u qiimo badan isla markaana leh qalab heerkiisu ugu sarreeyo. Ugu fiican? in ugu dhakhsaha badan aan awoodno cusbooneysii Pocophone F1 ilaa Android 9 Pie.
Waxay ahayd soo saaraha laftiisa oo xaqiijiyay in nooc caalami ah oo xasilloon ee MIUI 10, oo ku saleysan nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka Google, ayaa la heli doonaa toddobaadkan oo dhan.
Toddobaadkan waxaan cusbooneysiin karnaa Pocophone F1 MIUI 10
Sidan, cusub taleefan jaban oo laga helo xiaomi Waxaad heli doontaa cusbooneysiinta lagama maarmaanka ah si dhakhso leh si aad ugu raaxeysato waxa ugu fiican ee la socda cusbooneysiintan cusub ee Pocophone F1. Sida had iyo jeer ah, cusbooneysiintani waxay ku imaan doontaa OTA sidaa darteed waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad sugto Xiaomi si ay u bilawdo inay soo saarto MIUI 10 si aan u cusbooneysiinno Pocophone F1. Maskaxda ku hay in cusbooneysiintan ay noqon doonto mid culus, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad ku soo dejiso iyada oo loo marayo xiriirka WiFi maadaama ay u badan tahay inay ka badnaan doonto gig soo dejinta.
Xusuusnow in terminaalkan awooda badan uu leeyahay jirka polycarbonate laakiin qalab gudaha ku xoog badan. Si aad u bilawdid, shaashadeeda 6.18-inch ee LCD-ga waxay gaareysaa xalka Full HD + oo ay ugu mahadcelineyso wajigeeda 18: 9. Tan waa inaan ku darnaa processor Qualcomm Snapdragon 845 oo ay weheliso 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah taas oo noo oggolaan doonta inaan u dhaqaaqno ciyaar ama codsi kasta oo dhibaato la'aan ah taleefankan xoogga leh ee laga heli karo qiimaha ugu fiican Amazon: 309 euro. Haatanna si dhakhso leh waan awoodnaa cusbooneysii Pocophone F1 illaa Android 9 At mahadsanid imaatinka MIUI 10, maxaad sugeysaa Wax alaab ah lama helin.?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad cusbooneysiiso Pocophone F1 illaa Android 9 Pie
Sida loo daawado moobilka FC Barcelona vs Real Madrid